Calaamadaha Afduubyada Waxyaabaha loogu talagalay Caawinta Shabakadda
Qalabaynta shabakada webka ayaa loo sameeyey si loo soo saaro macluumaadka goobaha iyo blogyada kala duwan . Waxa kale oo lagu magacaabaa barnaamijyada goosashada ee shabakada iyo qalabka feylka xogta webka. Haddii aad isku dayeyso inaad ururiso xogta ku saabsan boggaaga, waxaad isticmaali kartaa barnaamijyadan soo saarida shabakada oo waxay soo qaadaan xogta cusub ama hadda jirta ee sahlan oo sahlan.
Simple PHP Scraper
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee laga soo saaro shabakadda - heavy truck appraiser jobs. Simple PHP Scraper wuxuu bixiyaa dhismaha wuxuuna qaabiyaa dataset adigoo soo dejiya macluumaadka bogaga gaarka ah ee macluumaadka iyo u gudbinta xogta CSVs. Waa sahlan tahay in boqolaal kumanaan oo internetka ah iyo blogs ku xoqaan iyagoo isticmaalaya barnaamijkan. Simple PHP Scraper wuxuu isticmaalaa tiknoolajiyooyinka ugu sareeya si loo helo xog badan oo maalinle ah, taas oo looga baahan yahay ganacsiyada badanaaba. Barnaamijkani wuxuu ku yimaadaa mid bilaash ah oo lacag ah, waxaana lagu rakibi karaa Mac, Linux iyo Windows si fudud.
Waa aalad kale oo cajiib ah oo cajiib ah oo laga soo saaro shabakad. Fminer.com waxay na siisaa si sahlan oo loo heli karo xogta dhabta ah, qaabaysan, oo si fiican loo qaabeeyey. Ka dibna wuxuu xogta ku xareeyaa internetka oo wuxuu taageeraa in ka badan 200 luuqadood, kaydinta xogta qaabab kala duwan sida RSS, JSON, iyo XML. Aan halkan idiinku sheegno in Webhose.io uu yahay codsiyada ku salaysan shabakada oo isticmaala macluumaadka gaarka ah marka aad uur leedahay ama soo saareyso boggaga internetka..
ScraperWiki waxay bixisaa taageerooyin tiro badan oo dadka isticmaala waxayna ururiyaan macluumaadka nooc kasta oo goobta ah ama blog. Uma baahnid wax download ah. Waxay micnaheedu tahay inaad kaliya bixiso kharashka qaybta caymiska iyo barnaamijka ayaa laguu soo diri doonaa adiga oo soo maraya email ahaan. Waxaad si dhaqso leh u kaydin kartaa xogtaada la ururiyey ee qalabka kaydinta daruuraha ama adeegahaaga gaarka ah. Barnaamijkan wuxuu taageertaa Google Drive iyo Box.net labadaba waxaana loo dhoofiyaa JSON iyo CSV.
Gawaarida ayaa si fiican loo yaqaan oo loo yaqaan 'free and premium versions'. Barnaamijka buuggan shabakada ah waa daruuro ku saleysan waxayna caawisaa boqollaal kun oo bog internet ah maalin kasta. Qaar ka mid ah xulashooyinka ugu caansan waa Crawlera, Cabbiraadaha Barta Counter-ka, iyo Qalabaynta Guriga. Warshaduhu wuxuu kuugu beddeli karaa boggaaga oo dhan si wanaagsan u habaysan oo wuxuu u kaydiyaa si toos ah isticmaalka offline. Qorshaha lacagta caymiska ayaa kuugu kacaya $ 30 bishii.
Dib-u-bixinta Hub ayaa weli ah barnaamij kale oo cajiib ah oo laga soo saaro shabakadda kaas oo loo isticmaalo in lagu ururiyo macluumaadka boqolaal kun oo goobood. Barnaamijkani wuxuu caawiyaa ka-qaadista iyo raadinta bogagga shabakadaha gudaheeda. Waxaad isticmaali kartaa ama ku daabici kartaa boggaga noocyo kala duwan sida JSON, SQL, iyo XML. Waxaa ugu fiican ee loo yaqaan interface interface-saaxiibtinimo, iyo qorshaha lacagta caymiska ah ayaa ku kacaya qiyaastii $ 50 bishiiba iyadoo la adeegsanayo in ka badan 100k boggag tayo sare leh.